China Factory Mutengo Yakaderera Voltage Cable Distribution Bhokisi Supplier-shengte vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Fekitori Mutengo Yakaderera Voltage Cable Distribution Bhokisi Rinotengesa-shengte
Iyi nhepfenyuro yeakaderera-voltage tambo vanogovera vanoshandisa yakatarwa frequency 50 / 60HZ, yakatemwa voltage 380V (660V) magetsi system sekugovana magetsi uye kutonga kwesimba, mwenje nemidziyo yekuparadzira.
Iyo inokodzera nzvimbo dzeveruzhinji dzekunze senge dzakasiyana nharaunda dzakaomarara, shanduko uye zviteshi zvekuparadzira, maindasitiri nemigodhi emakambani nemigwagwa yemumaguta, nzvimbo dzekugara dzeGadheni, zvivakwa zvepamusoro-soro, nhandare uye zvichingodaro.
Inonyanya kukodzera kushandiswa mumafekitori ane magasi anoparadza senge peturu uye makemikari maindasitiri, pamwe nenzvimbo dzakakwirira dzemhute yemunyu senzvimbo dzegungwa nezvitsuwa.
A. Icho chikamu chebhokisi chakagadzirwa neyakazara insulated polymer inoumbwa nezvinhu (SCM) neepamusoro tembiricha yekuyambuka kudzvanya. Bhokisi rese rakaunganidzwa nerin'i yechinhu chimwe nechimwe chinoshanda uye ine hunyanzvi hwekugadzira. Maumbirwo ayo ndeye novel, compact uye nyore kuunganidza. Uye ine yakasarudzika hunhu hwekusanaya kwemvura dhizaini uye dhizaini dhizaini.
B. Kabineti ine yakanakisa magetsi kuita. Iyo yekudzivirira indekisi, dielectric simba, leakage kuramba kutara indekisi uye kuchembera kuramba index yakanakisa. Kuumbana hakuwanzo kuitika kunyangwe munzvimbo dzakanyorova uye dzakaomarara.
C. Uye ine simba rakasimba kwazvo. Nechaisingaenzaniswi chengetedzo mashandiro esimbi bhokisi, kunyangwe kana mutsetse uri mukati mebhokisi waputsika kana kukuvadzwa nekunze kwesimba kukanganiswa, hazvingakonzere bhokisi kubhadhariswa, kunyanya rakanangana nenzvimbo dzine vanhu vazhinji isina mambure ekudzivirira.
D.Chose chikamu chebhokisi chakaumbwa uye chakaunganidzwa nezvivakwa, saka iine kukwirisa kwepamusoro uye kumisikidza kuiswa.
E. Kwakanaka kuputira kuita. Iyo kabhodhi muviri wakasungirirwa zvakakwana, pasina kuwedzera kwakanyanya kuputira kuita kwevhu system zvinhu pachayo uye yakakosha mweya mweya dhizaini dhizaini, inogona kunyatso kudzivirira mukana wekuti condensation uye chando mumakurukota emuviri.
F.Kukwirira kwemakemikari ngura kuramba uye kuita, inokwanisa kurwisa isina simba acid, isina kusimba alkali, munyu pfapfaidzo, kunaya kwemvura.
G. Kwakanaka kukwegura kuramba. Kuwedzera anti-ultraviolet zvinhu kune izvo zvinhu zvinoita kuti iro bhokisi riwedzere uye riine hupenyu hwakareba hwebasa.
Yakanyatso kuvharirwa chimiro neakasarudzika dhizaini dhizaini, dziviriro nhanho kusvika IP44 kana kunyange IP54.
I. Zvakapfuma zvemukati zvinhu zvinoita kuti kuiswa kwezvinhu zvemagetsi kuve nyore, nyore, kurema uremu, simba rakakwira, kupisa kwakawanda kupisa uye murazvo kudzora, chimiro chese chakatsiga, chakachengeteka uye chakavimbika.
J. Compact chimiro, dhizaini yakanaka uye yepanyama ruvara, inoenderana uye yakanaka, pasina kusvibiswa kwechiedza.
Siriyero nhamba Zita Kambani standard kukosha Kuita uye Zviratidzo Muedzo wekuyedza
1 kuwanda g / cm2 1.75 ～ 1.95 1.84 GB1033
2 Kubata kwemvura mg ≤ 20 18.3 GB1034
3 Thermal Pamusoro Kupisa ° C ≥ 240 240 GB1035
4 Charpy kukanganisa simba KJ / m2 ≥ 90 124 GB1043
5 kukotama simba Mpa ≥ 170 210 GB1042
6 Insulation Nemishonga (Zvakajairika) Ω × 1.0 × 1033 3.0 × 1013 GB1410
7 Insulation kuramba (kunyudza 24h) Ω × 1.0 × 1012 5.3 × 1012 GB1410
8 Simba Frequency Dielectric Simba MV / m .0 12.0 17.1 JB7770
9 Dielectric kurasikirwa chinhu (1MHz) - ≤ 0.015 0.013 GB1409
10 Hukama dielectric inogara (1MHz) - ≤ 4.5 4.2 GB1409
11 Magetsi kuramba s ≥ 180 190 GB1411
12 Leakage Chichatara Index (PTI) v ≥ mazana matanhatu 600 GB4027
13 Flame retardancy kirasi FVO FVO JB7770
14 Utsi chepfu kirasi Ⅱ Ⅱ JB7770
15 Utsi hwakawanda kirasi Ⅱ Ⅲ JB7770
Siriyero nhamba Chirongwa Kambani technical paramende
1 Rated frequency Hz 50/60
2 Rated uchishandisa voltage V AC 380/660
3 Rated kuputira voltage V AC 690/800
4 Rated ikozvino A ≤ 630
6 Rated yepamusoro inoshivirira yazvino Ka 100
7 1 min simba frequency inomira nemagetsi V 2500
8 Kuputsa chinzvimbo Ka 100
9 Chikamu chekudzivirira - IP44
10 Kirasi yekusvibisa - Ⅱ
Pashure: yakaoma-mhando shanduko
Zvadaro: OEM Fekitori 10KV Kirasi S11 Series Oiri-yakanyudzwa Shanduko Yakazara Yakasimbiswa Simba Shanduri-shengte